1 Waxaan soo kaban karto, Xogta laga Hard Drive ma Initialized?
Hello, maanta markii aan ku xirnayn WD external HD, waxaa aysan ka muuqan wax ka yar aan computer. Waxaan u tegey si ay u hubiso maamulka disk oo la ii sheegay HD ahaa uninitialized. Waxaa si fiican u shaqeeyay ka hor oo waxaan haystaa xog muhiim u ah oo ku saabsan. Ma jiraa wax aan bogsan karaan xogta aan initializing disk?
Waxaad noqon doontaa mid aad u xanaaqsan marka uu arko farrinta ah "Device aan la garanayn, ma initialized iyo Unallocated" on your computer. Waxaad jid ay u helaan wadid aad u adag, laakiin initializing wadid aad u adag. Waxaad tahay baqa in ay lumiyaan oo dhan xog muhiim ah oo ku saabsan in drive uninitialized adag. Laakiin runta waa in aad dib u hanato kartaa xogta oo dhan ka hor inta aad go'aansato in aad u initialize. Sidee? Waxaad u baahan tahay oo kaliya barnaamij uninitialized kabashada xogta disk.
Halkan waa talo: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Waxay noqon kartaa haddii aad doorbidayso ugu fiican inuu ka soo kabsado xogta ka uninitialized disk. Sidaa daraadeed, waxaad soo kaban karto, ku dhowaad dhammaan noocyada kala duwan ee files ka disk uninitialized si effortless oo khatar la'aan, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, waraaqaha, files audio, files qoraalka iyo in ka badan.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado xogta aan initializing disk hadda!
2 Qabtaan Uninitialized Disk Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Wax First hore, inuu ka soo kabsado xogta ka uninitialized disk, fadlan ha qaab ama initialize aad disk marka aad aragto fariimaha qalad la mid ah "drive boogta xumu waa ma initialized", "Drive Qaabka" iyo "Drive ma laga heli karaa", on your computer. Tani waa mid aad muhiim u ah iska ilaalinta xogta overwritten ku wadid aad u adag.
Haddaba aan ka bilowno kabashada xog ku saabsan computer Windows.
Tallaabada 1 Dooro "Recovery ah Barzakh," mode si ay u bilaabaan
Burcad Wondershare Data kabano Windows on your computer, ka dibna waxaad arki doontaa suuqa kala bilaabatay 3 hababka soo kabashada.
Halkan, inuu ka soo kabsado xogta ka uninitialized disk, aynu dooro "Recovery ah Barzakh," sida isku day ah. Hab Arintan waxay u sahlaysaa in aad ka bogsato xogta ka qoruhu aad disk uninitialized.
Tallaabada 2 baarista drive uninitialized adag
Hadda waxaad u baahan tahay in ay doortaan wadid aad u adag oo guji "Next" in iskaan qoruhu ku yaal.
Halkan dhan qoruhu aad disk uninitialized la ogaan doonaa oo ku qoran. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah aad doonaysid in aad ka bogsanayaan oo guji "bilow" in iskaan xogta laga badiyay.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta aan initializing disk
Ka dib markii iskaanka, dhammaan faylasha recoverable aad disk uninitialized la soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad ka eegi kartaa sida badan files on disk in la soo kabsaday karaan magacyo file.
Ugu danbeyn, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan xogta aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Faylal ay ka Silicon Power Murerfirma flash drive
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Uninitialized digsi